Sonic အဆိုပါ Hedgehog4အပိုင်း II ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Sonic အဆိုပါ Hedgehog4အပိုင်း II ကို
Sonic အဆိုပါ Hedgehog4အပိုင်း II ကို APK ကို
ဒီ 2D စွန့်စားမှုအတွက် Sonic, Tails နှင့်သတ္တု Sonic အဖြစ် Play!
သတ္တု Sonic, Little က Planet ကိုအပေါ်အတူတကွ Little က Planet ကိုလှည့်ပတ်ဆောက်လုပ်ထားဤအချိန်အသစ်တစ်ခုကိုမရဏဥတည်ဆောက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာ Eggman အတူတက်ပူးပေါင်းလျက်, သံသယရှိနှစ်လုံးကိုသိရပါတယ်။ ဒါဟာဒေါက်တာ Eggman ရဲ့အစီအစဉ်များကိုသတ္တုပါးနှင့်မရဏဥ mk.II. ချယူ Sonic နှင့်သူ၏ trusty sidekick မှတက်မယ့် တစ်ဦးဂန္နှင့်အတူတိုးမြှင့်ဂိမ်း, ငါးထူးခြားတဲ့ဇုန်များနှင့်ဇွန်လ Senoue, မူလကစိတ်ပျက်ပါဘူး 2012 ၏မေလအတွက်ဖြန့်ချိသောဤမြန်ဆန်နောက်ဆက်တွဲအားဖြင့်ရေးစပ်တဲ့တေးသံ '' Sonic, ခံစားမိ '' ။
Sonic အဆိုပါ Hedgehog4၏ဤလွှတ်ပေးရန်: အပိုင်း II ကိုလည်း get-သွားလာရင်းထံမှသော့ဖွင့်အပိုင်းသတ္တုတို့ပါဝင်သည်။ အဆင့်ဆင့်၏ဤဆုကြေး set ကိုသငျသညျ Sonic အဆိုပါ Hedgehog4ထံမှဇုန်၏ fiendishly ခက်ခဲဗားရှင်းကိုဖြတ်ပြီးသတ္တု Sonic အဖြစ်ကစားရှုမြင်: အပိုင်းဗြဲ Sonic အဆိုပါ Hedgehog4နောက်ကွယ်မှပြည့်စုံပုံပြင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သူတို့ကိုဖြည့်!
အဆိုပါ SEGA ၏ကျန်ထာဝစဉ်စုဆောင်းခြင်း, Sonic အဆိုပါ Hedgehog4ကဲ့သို့ပင်: အပိုင်း II ကိုထိုကဲ့သို့သောဦးဆောင်, မိုဃ်းတိမ်ကိုကယ်တင်နှင့် controller ကို support ကိုအဖြစ်ကဆက်ပြောသည် features တွေပါတယ်။ စုဆောင်းခြင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီဂိမ်းကို Android device များအတွက် Store က Play ကို Google ကနေအခမဲ့ download လုပ်ပါမှရရှိနိုင်ပါသည်။ ကြော်ငြာတွေမရှိဘဲဂိမ်းများကိုတွေ့ကြုံခံစားလိုသောကစားသမား $ 1.99 / € 2.29 / £ 1.99 မှာစျေးနှုန်းတစ်ဦးတည်းအချိန် In-app ကိုဝယ်ယူဘို့ထိုသူတို့ကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
- Sonic နှင့် Tails အဖြစ်အကောင်းဆုံးမှငါးဇုန်ခုနစ်အကြီးအကဲတွေ
- ယခု unlocked စတင်ချိန် မှစ. , ဇာတ်လမ်းတွဲသတ္တုအတွက်သတ္တု Sonic အဖြစ် Play!
- စူပါ Sonic သော့ဖွင့်ဖို့အားလုံးကိုအထူးဇာတ်စင်ဖြည့်!
- ထို Rolling, Copter နှင့်ရေငုပ်သင်္ဘော combo ဖျော်ဖြေဖို့ Tails နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း,
- သင်တို့ရှိသမျှသည်, ဧဒုံစတားလက်စွပ်ကိုစုဆောင်းနိုင်ပါသလား?
- In-App ကိုဝယ်ယူခြင်းကနေတစ်ဆင့်ကြော်ငြာ-ထောက်ခံမှုသို့မဟုတ်အခမဲ့ကြော်ငြာနှင့်အတူအခမဲ့ PLAY
- သင့်ဂိမ်းများကိုကာကွယ်ဖို့ - ဂိမ်းအတွက်မဆိုအချက်မှာသင့်ရဲ့တိုးတက်မှုသိမ်းဆည်းပါ။
- LEADERBOARD - မွငျ့မားရမှတ်များအတွက်ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်
- Control အတွက်အထောက်အပံ့: HID သဟဇာတနဲ့ controller
- "ဂန္ထဝင်-မှုတ်သွင်း Sonic ဂိမ်း၏ဤခေတ်သစ်အတွက်တစ်ဦးကိုခံထိုက်သော entry ကို။ " [4 / 5] - ယာရက်နယ်လ်ဆင်, Touch ကို Arcade (မေ 2012)
- "စီးရီး၏ပရိသတ်များနှင့် slick ပလက်ဖောင်းပြီးနောက်သူတို့အဘို့တစ်လျောက်ပတ်သော platform ။ " [4 / 5] - အင်ဒရူး Nesvadba, AppSpy (မေ 2012)
- "ဒါဟာစိတ်ကူး fanservice ပါပဲ။ " [4 / 5] - Carter က Dotson, 148Apps (မေ 2012)
Sonic 4: Episode II ကိုအသေးအဖွဲ
- Sonic အဆိုပါ Hedgehog4ရဲ့ပုံပြင် Sonic အဆိုပါ Hedgehog3& လက်၏ဖြစ်ရပ်များအပြီးတွင်ရာအရပ်ကိုကြာ
- အထူးဇာတ်စင် Sonic အဆိုပါ Hedgehog2ကနေပြန်လာအဆိုပါ halfpipe - သူတို့အရင်ကဲ့သို့အတော်လေးအဖြစ်ခက်ခဲတဲ့မဟုတ်သော်လည်းစိတ်ပူစရာမလို,
- သင် 16-bit မှာ Sonic စီးရီးထဲကနေဇုန်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုအခြားညွှန်းဆိုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသလား?
Sonic 4: Episode II ကိုနောက်ခံ
- Sonic အဆိုပါ Hedgehog 4: အပိုင်း II ကိုပထမဦးဆုံးမေလ 2012 အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
- Sonic အဖွဲ့နှင့် Dimps ကတီထွင်
- ခဲ Programmer သို့: Koji Okugawa
ဂိမ်း app များကိုကြော်ငြာ-supported ရှိပါတယ်နှင့်မျှမတို့အတွက်-app purchase တိုးရန်လိုအပ်သည်; In-app ကိုဝယ်ယူနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်အခမဲ့ကြော်ငြာကစား option ကို။
ဒီဂိမ်း "အကျိုးစီးပွားအခြေပြုကြော်ငြာ" ပါဝင်နိုင်ပါသည်နှင့် "Precise တည်နေရာဒေတာများကို" စုဆောင်းစေခြင်းငှါ (နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အ http://www.sega.com/mprivacy#2e_Third_Party_Info ကြည့်ရှုပါ)
© SEGA ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ SEGA, အ SEGA လိုဂို, Sonic အဆိုပါ Hedgehog 4: ထာဝစဉ်အပိုင်း II ကို, SEGA, နှင့် SEGA ထာဝစဉ်လိုဂို SEGA Holdings က Co. , Ltd သို့မဟုတ်ယင်း၏ affiliates ၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။
Sonic အဆိုပါ Hedgehog4အပိုင်း II ကို
586.24 ကို MB
Sonic အဆိုပါ ...
Sonic ပု ...
လက်နက်ကိုင် Battle: ...